Ion kadhi wokurarama chikwereti | akadai chimbadzo basa kukarukureta, basa mashoko
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Ion kadhi wokurarama chikwereti | akadai chimbadzo basa kukarukureta, basa mashoko
Annual muripo riri for free, zvingava kuva vazhinji vari kufunga pokushandisa "Ion kadhi" kuti wakagamuchira muna zveefa mabasa akasiyana-siyana Ion neimwe kuchitoro.
ari wokurarama chikwereti pakubhadhara matatu muripo pane kosi
Ion kadhi, uye kunongova matatu kusarudza chemhosva chitsama remwedzi "A kosi ? B kosi ? C Course".
Kana pakuenzanisa kusvikira yokupedzisira musi 100,000 Yen zvichidzika, 5,000 Yen pamwedzi mutsividzo mari iri A kosi, 7,500 Yen paboka B, muna C kosi zvave 10,000 Yen. Zvisinei, kana pachiyero hwunopfuura 100,000 Yen, nekuti chemhosva uwandu neimwe nzira yakasiyana, ngatiitei kungwarira. In wokurarama zvikwereti kubva
Ion kadhi, iwe kutaridzwa pamusoro mapoka ari kushanda kwechikuva. Pashure, apo kutenga kadhi, unogona kushandisa muripo nzira iri chete kubudisa "iri wokurarama chikwereti."
The wokurarama chikwereti kuti Ion kadhi mashandiro matatu
Ion kadhi, pane vatatu mabasa kuti "ribonucleic kuchinja basa ? ATM wokurarama chikwereti muripo webasa wokurarama chikwereti kubhadhara kwakawedzera basa". "Ribonucleic kuchinja basa" ndiwo basa kuti anogona kushandura muripo kuti yakashandiswa sezvo bundu pakuverengwa mu wokurarama zvikwereti, unogona kubata pakarepo kubva pamutemo nzvimbo Ion kadhi.
"ATM wokurarama chikwereti muripo webasa" munhu basa kuti anogona kubhadhara pakuenzanisa wokurarama chikwereti mari chero nguva kubva chisungo-up ATM. In wokurarama zvikwereti, kuti kuderedza mangwanani pachiyero kuchaita kuti nemari basa, chikamu ichi chiri kubudirira kana uchida kuderedza mari kubudikidza napo basa.
Munyaya "wokurarama chikwereti kubhadhara basa yakawedzera", 1 kuripwa pamwedzi, Unogona kuwedzera pa 000 Yen. Zviri vaya vanoda kuita nani uye kwazvo mutsividzo chirongwa uchida kuderedza kubhadhara. Dzokuvhiyiwa Kuwedzera zvokusvika kunyorerana, tinogona zvino kubva pamutemo nzvimbo Ion kadhi.
kuti anoongorora sei uye kana uchishandisa Notes
wokurarama chikwereti chomurayiro, zvichaita kutora waakaudzwa kubhadhara. Ndizvo nokuda Ion kadhi, wokurarama chikwereti yechikoro kubva Ion kadhi yazova "nouchapupu mwero 15,0 muzana gore negore."
Somuenzaniso, kana uri kunotenga mutero 100,000 Yen A kosi musi October 11, muripo achapiwa dzaona kubudikidza yokuita "100,000 × 15% ÷ mazuva 365 × mazuva 23 = 945 Yen". Nekuti mazuva 23 ari mazuva kubva October 11 kusvika November 2. Mune mamwe manzwi, debits yaNovember 2, vachava 5,945 Yen kubhadhara yaisanganisira.
kana uchida kunzwisisa chitsama payout nyore, funga kushandiswa "wokurarama chikwereti mutsividzo simulation" riri pamutemo nzvimbo Ion kadhi. Nokupinda kuitika nengaidzo kuburikidza kusarudza nzira iri kushandiswa, zvichakurudzira kuratidzwa pakarepo inotevera mubhadharo mari mu mari yaisanganisira.